JINGHPAW KASA: ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အားတရားရုံးတွင်အမှုစစ်
ပထမဆုံးရုံးချိန်းဖြစ်သော ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အမှု တရားရုံးမှ စကားသံများ
တရားသူကြီး - ဦးမြင့်ထူး
ရှေ့နေ - ဦးမာခါး
ရှေ့နေ- အမှန်ဆိုလျှင် ၁၈.၆.၂၀၁၂ နောက်ပိုင်း များတွင် ဒုစရိုက်နှိပ်နှင်းရေး အဖွဲ့ မှ အဓိက စစ်ဆေး ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိဆိုမှန်ပါသလား။
ရှေ့နေ- ထို့ကြောင့် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဦး လထော်ဘရန်ရှောင်၏ အသက်သည် (၁၆) နှစ်သာ ရှိသေးဆိုသည် မှန်ပါသလား။
ရှေ့နေ- ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် ထိုသို့ခြံလုပ်ငန်းကူညီလိုပ်ကိုင်စဉ် ၂၀၀၄-၂၀၀၇ ခုနှစ် အရှေ့ဘက်ကြားတွင် ခရီးဝေးလုံးဝသွား
ရှေ့နေ- ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒုစရိုက်နှိမ်နင်းရေးရုံးသို့ စ.ရ.ဖ တို့ဦး လထော်ဘရန်ရှောင်သည် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း တဦးမျှ စာပေးခဲ့ခြင်း ရှိသလား။
ရှေ့နေ- လာရောက်ဖမ်းဆီးချိန်တွင် ဖမ်းဆီးသူများမှ မ.က.န မြို့ပေါ်တွင်ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရန်ရှိသည်ဆိုကာခေါ်
ရှေ့နေ- စ.ရ.ဖ မှ ပထမ သတင်းပေးချက်တွင် တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ရှိဦး လထော်ဘရန်ရှောင်ဟု သတင်းပေးထားသည်ဟု ထွက်ဆိုထားပြီး ၂၃.၃.၂၀၁၂ ထုတ်မြ၀တီ သတင်းစာတွင်ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ဟု ရေးသားထားသည်။ ဘာကြောင်းအခုလို ကြီးမားစွာ
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် သူ၏ကိုယ်ပေါ်ရှိ ဒဏ်ရာများအား တရားသူကြီးရှေ့တွင်ပြသခဲ့သည်။(ပါးဘယ်ညာ ဓါးအားမီးအပူပေးပြီး
ပါးဘယ်ညာ ကပ်ထားပေးသောဒဏ်ရာ၊ ပေါင်တွင် ဓားဖြင့် လှီးထားပေးသောအရာ၊ ခြေသလုံးအရေခွံကွာထားပေး၊ ချက်ပါတွင်ရှိဒဏ်ရာများအားတရားသူကြီးရှေ့ပြသခဲ့သည်။)နောက်ရုံးချိန်း ၁၆.၇.၂၀၁၂ ဖြစ်သည်။
myen gwi ni ma w.p ni hpe zing ri ai zaw shang hte ni hpe mung K.K kaba law ai jam jau hte hkrum la sha u ga lo....W.P myusha na matu ahkyu hpye ya taw nga ai..
Seng Hpau Je said...
KK Waedai n hkru ai Myen lai hpe Lu ndang nyet kau lu na matu zai byeng ya jaw bang ya rit,lam woi la rit.matut na lamang hta awng dang u ga.God bless!!!
သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ KIA ဖြစ်ခဲ့သည်လို့ ဆိုလိုလို့မရဘူး။ နိပ်စက်လိုလည်းမရဘူး။ အစိုးရက လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာ။
ဟေး သူငယ်ချင်းတို့ ဒီခွေးခေါင်းဆောင်တွေကလူစကားဘယ်နားလည်မှာလဲ.ခွေးတောင်မှ အင်္ဂါမစုံတဲ့ခွေးလေ။လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာဘယ်နားလည်မှာလဲ.
God is always looking for His children.